WARARKA BARAAWEPOST Isniin 18 oktober 2010
JAAKADAHA IYO KHAMIISYADA LAGU ADEEGTO
Maalin baa anigoo gaari ka samaysanaya garaash ku yaal Magaalada Seattle ee aan ku noolahay ayaa milkiilihii oo carab ahaa igu yiri"dumarkiinu waa kuwo dadnimo leh" . Waxa aan weydiiyey waxa uu ula jeedo hadalkaa, markaas uu iigu jawaabay iney geesiyiin ku yihiin iney ku labistaan dharka hiddaha iyo diintooda lagu yaqaano oo aaney ku gor-gortominna meel kasta oo ay ku nool yihiin.
Markaannu taa isla garannay oon yarana hoosta kaga farxay ammaanta loo soo jeediyey gabdhaheena iyo hooyooyinkeena, ayaan waxaan isula soo daadegnay raggeena. Waxa uu igu dacaayadeeyey in aan ku labisannahay surwaal jiinis ah oo wax calaamad ah oo la iga sooco dadka caadi ah ee Mareykanka ku nool aaney iga muuqan. Taasi durba waan ku diiday oo waxaan tusiyey gar igu yaal inkastoo uusan saa u dheereyn uuna ahaa gar orgi. Waxanse isaga weydiiyey maxay tahay waxa isaga iyo ninka Meksikaanka lagu kala sooci karo oo muujinaya carabnimadiisa iyo Muslinnimadiisa waa haddii uu ahaa Muslim. Carab u shaqeeya ayaa jawaabteyda ku qoslay, una riyaaqay sida mudan een ugu jawaabay.
Dooddaas ninkaas uun baan iska difaacayey mooye, wey jiraan Soomaali is bed-beddesha oo sida jir-jirroolaha hadba cimilada la joogo isu ekkeysiiya. Waan ku faraxsannahay saaxibkey in uu igu mowqif noqdo oo uu dumarkeena ku ammaano sida qaayaha leh ee ay u xafidaan dhaqankooda oo ugu yaraan madaxa u dabooshaan xittaa haddii ay ku labisaan yihiin surwaal ku dheggan oo sida kubadda koleyga u soo muujinaya qaar dambeedkooda. Gabdhaha Soomaaliyeed eek u nool Waqooyiga Ameerika & Europe waxa ay u dul qaateen xin fara badan oo kaga yimaada dadka ay la nool yihiin oo qaarkood jeclaan lahaa iney arkaan iyagoo madaxxa feyda. Dadka maskaxda furan ee ajnabiga ah wey ku amaanaan oo waxa ay yiraahdaan quruxdooda ayey soo saartaan, isla markaana waxa ay kala soocdaa iyaga gabdhaha Waddanka aan dariska nahay ee Itoobiya.
Dadnimada waa midda ku maldahan jirka oo dhan oo qofkii Ilaahey u hibeeyey laga dheehan karo socodkiisa, macaamilkiisa, hadalkiisa iyo wejigiisa. Dalka iyo dadka magic ha laga doonto, maskaxda iyo laabtana ha loo furo Walaalka. Dadka waxa loo baahan yahay inay u dhiibtaan talada qofkii daacadnimo ugu adeegaya oo aaney qabyaaladdu indhaha ina tiring. Waa inaan is weydiinaa muxuu qofku qaban karaa ee sidii hore inoo baabi�isay inaan u fikirin qofkee qolo ila wadaagta? Taasi waan aragnay halka ay na gaarsiisay Waa in siyaasadda Dalka weji kale loo sameeyo, wixii danteena ku jirto ha lagu tallabsado. Ra�iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliyana loo duceeyo in uu Ilaahay u fududeeyo hawlihiisa, Ilaahayna ka dhigo ninkii isku keeni lahaa walaalaha Soomaaliyeed in uu ka dhib qaado dhibaatadan raagtay oo ah mid gacantooda ku kasbadeen.
W/Q. Mxamuud Yuusuf